भन्छन्-जुनी फेरे जस्तो लाग्छ रोल्पा, मंसिर २१ । विद्यालयमा आवश्यक भवन नहुँदा समस्यामा परेका त्रिवेणी गाउँपालिका–२ झुम्लुङका विद्यार्थीहरु अहिले खुसीयालीमा छन् । विगत लामो समदेखि विद्यालयको भवन निर्माणका लागि हार–गुहार गरिरहेका शुक्र माध्यामिक विद्यालय झुम्लुङका शिक्षक, अभिभावकहरु पनि अहिले खुसीयालीमै छन् । विद्यालयको आवश्यकतालाई हेरेर....
शेयर बारे जानकारी दिन तालिम
रोल्पा अनलाइन Thursday, November 16, 2017
रोल्पा, कात्तिक ३० । रोल्पाको लिबाङमा आगामी पुस १ गते एक दिने शेयर तालिम हुने भएको छ । शेयर बजार के हो र कसरी प्रवेश गर्ने ? शेयरबजारका फाइदा तथा जोखिमहरु, शेयरबजार प्रवेश गर्नुअघि जान्नुपर्ने कुराहरु तथा सुरक्षित लगानी र भरपर्दो आम्दानीका विषयमा प्रशिक्षण दिइने....
रोल्पा, कात्तिक ३० । रोल्पामा उम्मेदवारहरुले नागरिकमाझ आकर्षक विकासका योजनासहित गाउँगाउँमा चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरु नागरिकलाई रिझाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा आधुनिकीकरण, सडक सुधार गर्ने जस्ता आकर्षक नारासहित गाउँ पसेका छन् । तर बालुवा चाल्दा सुनका साना टुक्राहरु भेटिने लुङ्ग्रीखोलाको मुहान सुनछहरी झरनाको सुन....
कृषि उपज संकलन केन्द्र अलपत्र (भिडियो रिपोर्ट)
रोल्पा अनलाइन Wednesday, August 9, 2017
रोल्पा, साउन २५ । रोल्पाका गाउँ–गाउँमा सडक पुगेपछि गाउँमा स्थापना गरिएका कृषि उपज संकलन तथा विक्रि केन्द्रहरु बन्द भएका छन् । पहिले गाउँमा सडक नपुग्दा सबै किसानहरु मिलेर एउटै स्थानमा विभिन्न कृषि उपज संकलन गरी विक्रि गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले किसानको खेत, बारीमै गाडी....
द्वन्द्वपीडितले अन्तिम किस्ताको राहत बुझे (रिपोर्ट सहित)
रोल्पा अनलाइन Monday, August 7, 2017
रोल्पा, साउन २३ । सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका र बेपत्ता पारिएका रोल्पाका द्वन्द्वपीडितहरुले अन्तिम किस्ताको राहत रकम बुझेका छन् । पूरा राहत रकम नपाएका पीडितहरुले अन्तिम किस्ता बाफत्को पाँच लाख लामो समयपछि बुझ्न पाएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मृत्यु तथा बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारलाई सरकारले....
रोल्पाका जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न कठिन
रोल्पा अनलाइन Friday, August 4, 2017
रोल्पा, साउन २० । प्रयाप्त भौतिक संरचना र समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा रोल्पाका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय तहबाट जनतालाई सेवा दिन कठिन भएको छ । सिंह दरबार र जिल्ला सदरमुकामबाट पाउदैं आएको सेवा सुविधालाई जनताकै घर आगनमा पु¥याउने भनिएता पनि भौतिक संरचना र कर्मचारीको अभावमा जनप्रतिनिधिहरुलाई....
वडाध्यक्षलाई यी कामहरु गर्ने अधिकार हुन्छ ?
रोल्पा अनलाइन Friday, July 21, 2017
काठमाडौं । निर्वाचनसँगै प्रत्येक महानगरपालिका तथा नगरपालिकाबाट १/१ जना मेयर तथा उपमेयर, प्रत्येक गाउँपालिकाबाट १/१ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रत्येक वडाहरुबाट १ जना अध्यक्षसहित अन्य ४ जना सदस्य चयन हुनेछन् जसमध्ये प्रत्येक वडाबाट एक दलित महिलासहित अनिवार्य दुई महिला निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिका र....
रोल्पाका ३ गाउँपालिकामा बैंक खुल्दैं
रोल्पा अनलाइन Thursday, July 20, 2017
रोल्पा, साउन ५ । रोल्पाको थबाङ, माडी र त्रिवेणी गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंक खुल्ने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये वाणिज्य बैंकको पहुँच नपुगेका ४ सय १२ मध्ये तत्काल २ सय ५० स्थानमा जाने सहमति गरेका छन् । एक बैंक गएको....
रोल्पामा ७० प्रतिशत मत खस्यो, थबाङमा एक दशकपछि मतदान
माधवकुमार ओली Wednesday, June 28, 2017
रोल्पा, असार १४ । रोल्पामा करिब ७० प्रतिशत मत खसको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । १० वटा स्थानीय तहमा करिब ७० प्रतिशत मत खसेको अनुमान छ । जिल्लाका एक नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा शान्तिपूर्ण मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कमल....